DIBADBAXYO RABSHADO WATA OO MAR KALE KA CURTAY ITOOBIYA | Faafan News
DIBADBAXYO RABSHADO WATA OO MAR KALE KA CURTAY ITOOBIYA
ADDIS ABABA (FAAFANNEWS) -Banaanbaxayo iyo qulqulatooyin ayaa mar kale ka bilowday goobo ka mid ah dalka Itoobiya. Dibadbaxyada iyo qulqulatooyinka oo shalay ka dilaacay magaalada taariikhiga ah ee Gonder ayaa la sheegay in ay dad ku dhinteen.
Saxaafada u heelisa mucaaradka ayaa tibaaxday in banaabaxyadu bilowdeen shalay aroortii kadib markii maxkamad la horkeenay mid ka mid ah hogaamiyaasha u ololeeya in dhulka Wolqeyt dib loogu daro gobolka Axmaarada.
Wakaalada wararka ee Reuters ayaa xiqiijisay in ay rabshadaha ku naf waayeen 4 qof, balse warar lagu daabacay mareegaha taageera mucaaradka ayaa dhimashada gaadhsiinaya 10 qof oo ay caruur iyo haween ku jiraan.
Itoobiya ayaan weli si rasmi ah uga hadal qulqulatooyinka Gonder ee shalay, balse ra’isulwasaaraha dalka ayaa markii u horeesay cambaareyey mudahaaradyadii hore ee ka dhacay Gonder iyo Oromiya isaga oo ku tilmaamay sharci-daro.
Docda kale, maanta iyo Axada ayaa lagu wada in ay dibadbaxyo kale ka dhacaan dalka iyada oo kooxaha dalwada ka soo horjeeda ay dadweynaha ugu baaqaan in la isu soo baxo.
Waxaa aad u adag in wax xog ah laga helo dalka iyada oo dawlada lagu eedeye in ay gooysay is-gaadhsiinta si ay u xakameyso abaabulka banaanbaxyada iyo xogah laga helayo.
Hailemaraim ayaa xusay in ay dawlada masuuliyad ka saaran tahay sidii loo ilaalin lahaa amaanka iyo nidaamka.
Banaanbaxa Gondher ee shalay ayaa lagu bartilmaamsaday xafiisyada iyo hantida dawlada iyada oo qabaleeyada qaarkood dab lagu qabadsiiyey xafiisyada dawlada.
Xukuumada EPRDF ayaa ilaa kal hore la tcaaleyso kacdoon shacab oo lagu diidan yahay maamul-xumada dawlada iyo wax loogu yeedhay musuqmaasuq baahsan oo dalka aafeeyey.
Sidoo kale, waxaa jira qoomiyada saluugsan sida loo qaybiyo awooda dawlada iyo khayraadka dalka iyga oo farta ku fiiqaya in taageerayaasha TPLF ay maroorsadeen awooda islamarkaana qoomiyadaha kale aan la tixgalin.
Dawladaha reer Galbeedka ayaa xukuumada Itoobiya ku amaana la dagaalnka saboolnimada iyo in ay wax ka qabatay adeegyada asaasiga ah ee bulshada loo fidiyo, balse waxa lagu dhaleeceyey xad-gudubyo dhanka xuquuqda aadanaha ah, xakameynya saxaafada iyo sida ay ula dhaqanto ururada mucaaradka ah.
Sfaardaha reer Galbeedka ayaa dadkooda uga digay in ay tagaan meelaha rabshadahu ka jiraan iyo xaruumaha dadki isugu yimaado.
Khubarada la scota xaalada dalka ayaa saadalinaya in dalku qarka u saaran yahay rabshado salka ku haya qoomiyadaha iyo isirka kuwaas oo lagu hooban karo.